IFrench Way yeSantiago: izitobhi ezithakazelisa kakhulu | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Iziqondiso
ICamino Frances de Santiago isetshenziswa kakhulu ngabahambi ngezinyawo abenza i- Umzila weJacobean. Futhi iyona enesiko lomlando elikhulu kunawo wonke, njengoba sekuchaziwe ku 'ICodex Calixtino', eyabhalwa ngekhulu leshumi nambili futhi okungenye yemibhalo ebaluleke kunazo zonke ebhalwe ngohambo lokuya I-Santiago de Compostela.
ICamino de Santiago Frances ingxenye ye- ISan Juan de Pie de Puerto, eGallic Lower Navarra, lapho kufika khona imizila ebaluleke kakhulu yaseJacobean eYurophu. Bese ufaka iSpain ngenganekwane Kudlula amaRocesvalles futhi iqhubeka nohambo lwayo ngokusebenzisa iNhlonhlo Yase-Iberia ize ifike edolobheni loMphostoli. Ake sidlule kukho. Uma uzoba nesibindi sokusilandela, uzokujabulela amadolobha amahle omlando, izindawo ezinhle kakhulu nohambo olungenakulibaleka.
1 ICamino de Santiago Francés: izitobhi zayo eziyinhloko
1.1 I-Estella, inhlokodolobha yeNavarrese Romanesque
1.2 INájera, okunye ukuma okumqoka eCamino de Santiago Frances
1.3 ISanto Domingo de la Calzada
1.4 ICarrión de los Condes
1.6 IVillafranca del Bierzo, emngceleni waseGalician weFrance Way yaseSantiago
1.8 Amafosholo eNkosi
2 Kunini kangcono ukwenza iCamino de Santiago Frances
ICamino de Santiago Francés: izitobhi zayo eziyinhloko
Ohambweni lwethu, sizoma kwamanye amadolobha alolu hambo lweJacobean. Kepha hhayi emadolobheni amakhulu, ozovele wazi okungaphezulu kokwanele, kepha kulawo amanye amadolobha amakhulu anesiko elikhulu lomlando. Ake siqale ukuhamba.
I-Estella, inhlokodolobha yeNavarrese Romanesque
Idolobha lomlando lapho zikhona, i-Estella iyabhekwa inhloko-dolobha yeNavarrese Romanesque. Uzofika lapho ngemuva kokushiya iPamplona futhi sikukwazisa ukuthi ubone i- Isigodlo seMakhosi aseNavarra, okuwukuphela kokwakhiwa komphakathi wamaRoma okuhlala kuwo wonke uMphakathi Ozibusayo. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi iyiSikhumbuzo Sikazwelonke.
Ngokuhambisana nalokhu, kufanele futhi wazi i- inkantolo, Isakhiwo seBaroque seXVIII; leyo kaSancristóbal, Renaissance, kanye eyeMbusi, evelela ubulula bayo obubabazekayo. Kufanele futhi uvakashele izinsalela zocingo Ikota entsha yamaJuda, lapho kugcinwa khona umbhoshongo onezikhala ezimbili.
Isigodlo seMakhosi aseNavarra
Kepha, uma u-Estella evelela okuthile emadolobheni aseCamino de Santiago Frances, kungenxa yalokho ifa elikhulu lenkolo. Lakhiwe ngamasonto afana nalawa ISan Pedro de la Rúa, womoya omangalisayo; lokho kwe Ithuna elingcwele,, enendawo yayo evusa amadlingozi evutha kakhulu yamaGothic; lokho kwe San Miguel, neSembozo sayo seVangeli; lokho kwe San Juan, ne-façade yayo ye-neoclassical, noma i- I-Basilica yePuy, kubuyiselwe ekhulwini lama-XNUMX.
Okunye okungamagugu enkolo ama-convents anjengeLas Ama-Recoleta Conceptionists, ne-façade yayo enhle, nokuthi Santa Clara, eyakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi enezindlu ezintathu ezibabazekayo zobuciko bama-altare.
INájera, okunye ukuma okumqoka eCamino de Santiago Frances
Uzothola umbono ngokubaluleka komlando kwaleli dolobha elincane eLa Rioja uma sikutshela ukuthi, okwesikhashana inhlokodolobha yoMbuso WaseNájera-Pamplona, emuva ngekhulu le-XNUMX. E-villa kufanele uvakashele amahle Isigodlo saseSanta María la Real, ikakhulukazi ithempeli lalo, nenhlangano yasebukhosini, nobukhazikhazi balo UCloister weK Knights, efinyelelwa yi UCarlos I Gate ngesitayela se-gothic esivuthayo.
Kufanele futhi ubone eNájera izinsalela zakudala alcazar; the ibandla lesiphambano esingcwele, itshe eliyigugu le-Renaissance, ne Isigodlo seSanta Elena, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Umlingiswa ohlukile une- Ingadi Yezitshalo yaseLa Rioja, isimanga uma uthanda izitshalo.
ISanto Domingo de la Calzada
Leli dolobha linamasiko amaningi kwiCamino de Santiago Frances kangangokuba ine leyenda kuhlobene nalokhu. Kuthiwa isihambeli sisolwa ngokubulala okwenziwe edolobheni. Ukufakazela ubumsulwa bakhe, uSanto Domingo wakwenza lokho fly inkukhu eyayivele iphekiwe nasepuletini. Ngakho-ke isisho "ISanto Domingo de la Calzada, lapho isikhukhukazi sasicula khona ngemuva kokuwosa".
Vele eyakho ICathhedral, lapho kuhlala khona eyodwa yalezi zinyoni, kungenye yezindawo okufanele uzivakashele. Ihlanganisa izitayela zase-Romanesque nezamaGothic, yize umbhoshongo waso ozimele yiBaroque. Ngaphakathi, unekhwaya enhle yasePlateresque, ithuna likasanta uqobo namasonto amabili amahle, lawo aseSanta Teresa naseLa Magdalena.
ICathhedral yaseSanto Domingo de la Calzada
Kufanele futhi ubone eSanto Domingo de la Calzada Isigodlo saseSan Francisco, Isitayela se-Herrerian nokuthi namuhla i-parador de turismo, kanye ne ICistercian abbey, enocezu oluwubukhazikhazi obabazekayo.
Ngokuya kwezakhiwo zomphakathi, leli dolobha yilona elikhulu kunawo wonke indawo ebiyelwe ngodonga ukuthi zingaki ezigcinwe eLa Rioja futhi zinamakhaya amaningi amahle. Isitayela se-Baroque yizo Iholide laseDolobheni, lo Indlu yaseMarquis yaseLa Ensenada kanye nokuthi Ezokungcebeleka. Esikhundleni salokho, i- indlu yoBuzalwane beNgcwele yi-Renaissance, kanti leyo ye- Ababhusha Abadala futhi i Isigodlo sikaNobhala kaCarlos V ziyi-neoclassical.
ICarrión de los Condes
Inhlokodolobha yesifunda sasePalencia Indawo yokulima Kuwo wonke umlando, leli dolobha elincane libe nezakhiwo ezinhle zaseRoma. Phakathi kwabo i- Isonto laseSanta María del Camino kanye nokuthi Santiago, ene-façade ekhumbuza iPórtico de la Gloria yesonto elikhulu laseCompostela. Kepha futhi Isigodlo saseSan Zoilo, ene-Plateeresque cloister ekhangayo, naleyo ye- Santa Clarakanye ne ISonto Lethu Lady of Bethlehem, ene-plateresque altarpiece enhle.
Kakade usengxenyeni yeLeonese yeCamino de Santiago Frances, uzofika endala I-Asturica Augusta IsiRoma. Ukukukhombisa konke ongabona kukho kuzodinga i-athikili engaphezu kweyodwa.
Kodwa-ke, ukuvakashelwa okubalulekile yi udonga oludala kusukela ngekhulu le-XNUMX, ligcinwe ngokuphelele; i Iholide laseDolobheni, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX futhi iwashi lalo elishaya amahora nonodoli ababili abagqokile magoba; amasonto Saint Barthelemy y Santa MartaI-Romanesque eyokuqala neoclassical yesibili; izindela zezindela i-San Francisco futhi i Sancti Spiritus futhi okumangalisayo Isemina enkulu, isakhiwo esidala esinokukhumbula kukaHerrerian.
Isigodlo se-Episcopal sase-Astorga
Kepha kunezakhiwo ezimbili e-Astorga ezigqame kwezinye. Owokuqala yi- ICathhedral, ehlanganisa izitayela ze-Gothic, Renaissance neBaroque futhi inefaadade enhle yeChurrigueresque. Owesibili yi Isigodlo se-Episcopal, umsebenzi omuhle wabakhulu U-Antonio gaudi engafinyeleleki ngesitayela njengayo yonke eyakhe.
IVillafranca del Bierzo, emngceleni waseGalician weFrance Way yaseSantiago
Besingama e I-Ponferrada ukukutshela ngenqaba yaso yaseTemplar, amasonto ayo nezindela zayo. Kodwa-ke, sikhethe ukudlula ukugxila kwelinye idolobha elingaziwa kodwa elihle ngokulinganayo.
IVillafranca del Bierzo yiyo yonke Indawo Yomlando Yezobuciko. Lokhu kungenxa yezimangaliso ezifana ne- ISonto Maria Santa de Cluny Collegiate, isakhiwo esikhulu sekhulu le-XNUMX; i isonto-isigodlo seSan Nicolás, okwakhiwa i-El Escorial njengesibonelo sayo; i Isigodlo saseSan Francisco, eyasungulwa nguDoña Urraca ngekhulu le-XNUMX, kanye Inqaba yaseMarquis yaseVillafranca, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX kweledlule ngesitayela sombuso.
Kakade usengxenyeni yeGalician yeCamino de Santiago Frances, uzofika eSamos, esendaweni enhle esifundazweni sase Lugo. Kubuswa yi ISierra del Oribio futhi i izintaba zasePiedrafita. Kuyo kufanele ubone umxhwele UBenedictine Abbey weSanta Julian, okuvela kuye ngekhulu lesi-XNUMX.
Yidolobha lokugcina lokubaluleka ngaphambi kokufinyelela I-Santiago de Compostela. Kuyo kufanele ubone ifayela le- Isonto lamaRoma laseVilar de Donas, eyakhiwa maphakathi nekhulu le-XNUMX, kanye ne- Inqaba yasePambre, uthango lwangenkathi ephakathi lwalulondolozwe kahle kakhulu yize lwalusendulo.
Kunini kangcono ukwenza iCamino de Santiago Frances
Njenganoma iyiphi enye indlela yokuhambela, iCamino Frances de Santiago ayinconywa ezinyangeni ezibandayo. Amazinga okushisa aphansi awakulungele ukuhamba futhi futhi athanda ukuhambisana nesikhathi sonyaka semvula.
Futhi ihlobo aleluleki ngokuhamba ngezinyawo. Amazinga okushisa aphezulu azokuphoqa ukuthi wenze ukugqoka okuningi noma ume emahoreni aphakathi nosuku. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukuba yizinsuku ezimatasa kakhulu, isimo sokuthola indawo ku- amahostela wabahambi.
Ngakho-ke, isikhathi esihle sokwenza iNdlela yaseFrance yile intwasahlobo, noma ungakhetha futhi izinyanga zokuqala zekwindla.
Sengiphetha, sikubonise ezinye ze- izitobhi ezithakazelisa kakhulu eCamino de Santiago Frances ngokombono omkhulu. Sizamile ukukutshela ngamadolobha angaziwa kakhulu kunedolobha elikhulu lesifundazwe. Kunoma ikuphi, ukwenza lo mzila wokuhambela njalo kuyisipiliyoni enothisayo futhi emangalisayo. Awuzizwa uthanda ukushaya umgwaqo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Indlela yaseFrance yeSantiago
Sawubona! Sithanda ukucacisa, ukuphela kwesiteji ngemuva kokuthi iVillafranca - ngokusho kweCalixtino codex - idolobha laseTriacastela. Isayithi ngaphandle kokubalula, sincoma ukuthi uvakashele. Ngikufisela okuhle!
ISzéchenyi Spa eBudapest